သက်ဝေ: Merry Christmas & Happy New Year 2009
Posted by သက်ဝေ at 9:45 AM
- December 24, 2008 at 10:12 AM
Merry Christmas and Happy New Year ဖြစ်ပါစေအစ်မ။ လက်ဆောင်လေး ယူသွား ပါတယ်။
sonata-cantata December 24, 2008 at 10:33 AM
Happy New Year ~ Happy New Year ~~
(မသီတာရဲ့ အသံ ချိုချိုလွင်လွင်လေးနဲ့ ဆိုသွားတယ်နော်)
အောင်သာငယ် December 24, 2008 at 10:49 AM
Merry Christmas & Very Happy New Year!!!!!!!!!!
mirror December 24, 2008 at 1:02 PM
Merry Christmas & Happy New Year နော်အစ်မ...အစစအဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပြီး လက်ဆောင်လဲယူသွားပါတယ်။
sin dan lar December 24, 2008 at 1:08 PM
Merry Christmas and Happy New Year to U !!
strike December 24, 2008 at 4:55 PM
same to you sis "Thet Wai"
nu-san December 24, 2008 at 9:36 PM
မမသက်ဝေရဲ့ လက်ဆောင်ကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး လာယူသွားတယ်... ပုံလေးတွေက ချစ်စရာလေးတွေ.. :)
Merry Chirstmas and Happy New Year 2009!!
PAUK December 25, 2008 at 1:37 AM
ThuHninSee December 25, 2008 at 4:04 PM
khin oo may December 26, 2008 at 1:00 AM
merry chirstmas ..happy new year
ရွှေဂျမ်း December 26, 2008 at 2:40 AM
Same to you! =) ပုံလေးတွေက ချစ်စရာ။
Yu Wa Yi December 27, 2008 at 1:30 AM
အစ်မ သက်ဝေရေ..ခုနလာမလို့ ဟာ မီးပျက်သွားလို့ ။ ခုမှလာရတယ်။ ပျော်ရွှင်စရာနှစ်သစ်ဖြစစ်ပါစေအစ်မ။ ပုံလေးတွေလည်းလှ။
ပုံရိပ် December 28, 2008 at 2:28 AM
ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေ မသက်ဝေ။ ပုံလေးတွေက ချစ်စရာလေး။
Moe Cho Thinn December 31, 2008 at 2:25 AM
ပျော်ရွှင် ကြည်နူးဖွယ် နှစ်သစ် မင်္ဂလာ ဖြစ်ပါစေ မမရေ..